Rooney Oo Ku Canaantay Ferguson Taatikada Labadii Final Ee Barcelona, Kana Hadlay Kulanka Man City vs Real Madrid – Laacibnet.net
Rooney Oo Ku Canaantay Ferguson Taatikada Labadii Final Ee Barcelona, Kana Hadlay Kulanka Man City vs Real Madrid
Xiddigii hore ee Manchester United ee Wayne Rooney ayaa ku canaantay tababarihiisii hore ee Sir Alex Ferguson taatikadii naf-hurnimada ahayd ee uu Barcelona ula ciyaaray labadii final ee Champions League.
Red Devils ayaa laba jeer finalka Champions League ay ku kulmeen Barcelona oo uu tababare u ahaa Pep Guardiola sannadihii 2009 iyo 2011, waxaana labada jeer ba guul-darro loo xambaariyey Man Unitedl, iyadoo ay libintana la hoydeen Lionel Messi, Xavi, Andres iyo Iniesta iyo haleeyayadii kale ee Barca ee waqtigaas.
Wayne Rooney oo wax laga weydiiyey guul-darrooyinkii kooxdiisa kasoo gaadhay Barcelona waqtigaas, ayaa waxa uu canaan dusha uga tuuray Sir Alex Ferguson, isagoo sidoo kalena saadaaliyey kulanka Real Madrid iyo Man City ee Jimcaha, waxaanu yidhi: “Mar walba way ku adag tahay koox sida Real Madrid ah inay tidhaahdo ‘waxaanu isku xeeraynaa kubadda’. Waa sidii Manchester United oo kale.
“Laakiin Anagu waxaanu u guul-darraysanay labadii final inaanu cagta-cagta u saarnay ciyaartoydii Guardiola ee Barcelona, anagoo isku dayaynay inaanu culays saarno oo aanu dhinac walba kaga nimaadnom, waxaanay taasi ahayd ismiidaamin.”
Rooney waxa uu ka sheekeeyey sidii uu Sir Alex Ferguson ugu kalsoonaa in kooxdiisu ay ka adkaan karto Barcelona haddii ay weerarto, waxaanu yidhi: “Waxaan xasuustaa Alex Ferguson oo leh ‘waxaynu nahay Man United, waxaynu doonaynaa inaynu weerarno, dhaqanka kooxdan ayaa sidaas ah’. Waxaan filayaa in dhamaan ciyaartoydu ay ogaayeen inay tahay tallaabo qaldan.”
Intaas kaddib waxa uu Rooney ka hadlay ciyaarta Real Madrid iyo Manchester City ee lugta labaad ee wareegga 16ka tartanka Champions League, waxaanu yidhi: “Aniga fikirkayga, muhiimaddu maaha sida aad u ciyaarto kulamada waaweyn ee Champions League, mar haddii aad guuleysato. Bal eeg sidii ay Liverpool u ciyaartay finalkii Champions League ee sannadkii hore – Waxay ila tahay in Zinedine Zidane uu maskaxdii noocaas ahayd ku fikirayo.”
Sulthan Ilkacaze says:
Wayne rooney hadal nin weyn oo xigmadeesan ayuu ku hadlay Runtii